London Air Ambulance inopomera kunyanya kwechisimba chiri kuitika muguta guru ndechekurova uye kupfura - Emergency Live
Chishanu, June 21, 2019
London Air Ambulance inopomera kunyanya kwechisimba chiri kuitika muguta guru ndechekurova uye kupfura
LONDON - Dzimba rine chisimba. The Air Ambulance Service muLondon inotaura kuti vazhinji vekufona kwekukurumidzira ndekwekupfira uye kuuraya mhosva.
Mifananidzo yakabudiswa musi wechina inoratidza kuti 32 muzana yevarwere vanobatwa nevanosangana nedambudziko rekutsvaga mhepo uye varapi vepachirwere mumwedzi mitanhatu yekutanga ye2018 vakanga vachibaya kana kuuraya vanhu vakaurayiwa.
Chikamu chechipiri chikuru chekukurumidzira ne 27 muzana yehuwandu chaive nengozi dzemigwagwa dzemugwagwa, nekukuvadzwa kunotsigirwa kubva pakuwa kana kukwirira kuumba 20 per cent.
Saka, muLondon vanotambudzwa nekubayiwa uye kupfura zvinowanzoita kuti zvive zvekuparara kwemugwagwa.
Panguva iyoyo, chiremba wekutungamirira webasa, Dr. Gareth Grier, akati zvakanga zvisiri zvekare kuvhidhiyo "kuita chirwere chakasununguka chekurova maronda kaviri pazuva rimwe chete," achienderera mberi achiti: "Izvi zvingave zvisinganzwisisiki zvishoma makore shure. "
WHO - Utano munzvimbo yeEurope: nguva yekuita pane uchapupu
Luxfer's Yakanzwisiswa ECLIPSE ™ Zvinyunguduru Zvokuratidzwa paThe Emergency Services Show 2018